You are here: Home Other [SHAN] Biography [SHAN] ပိုꨓ်းတူဝ်ꨀꨰပ်ꨳ ꨬလꨳေꨁုꨳပူင်ꨀꨮꨤမ်း ꨅဝ်ꨳꨀွꨓ်းꨅိူင်း Sao Korn Jerng; His Life & His Speeches
1. နတျနှငျ့မိရိုးဘလာ - ဦးမောငျမောငျတငျ (မဟာဝိဇ်ဇာ)
... ငရဲ နှင့် နတ်ပြည် (Hell and Heaven) - ဦးမြင့်ဆွေ(မန္တလေး-ရန်ကုန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး) ...
2. ကငျ့ဘဲလျ နှငျ့ ကငျ့ဘဲလျလမျး - မွငျ့ဆှေ
... ဈေးများကို လျှောက်ကြည့်ခြင်း - မြသန်းတင့် ရန်ကုန်ဆူးလေဘုရားပြတိုက် ကြေးရုပ်ငယ် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း မန္တလေးရတနာပုံ နှင့် ရန်ကုန်ရတနာပုံ - ဇေယျ ဦးမြင့်ဆွေ၏ဆောင်းပါးများ ...
3. သျှမ်းရိုးမ စွယ်စုံ အဘိဓာန် (Daily Update)
... ကန့်ကွက်သောအခါ မြန်မာ မင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးသြဇာ သက်ရောက်မှု ရှိကြောင်း ကျေညာ၏။ ယင်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ၁၈၇၅ ခု၌ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် ဆာဒေါက်ကလပ်ဖောဆိုက်သည် မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်လာကာ မင်းတုန်းမင်းနှင့် ...
4. အဘစိနျဗဒေါ၏နောကျဆုံးပှဲမြား - လူထုဒျေါအမာ
... - လူထုဒေါ်အမာ မန္တလေးမြို့နှင့်ပုလိပ်ရောဂါ - လူထုဒေါ်အမာ အဖေ နဲ့ အဖိုး - လူထုဒေါ်အမာ ဂီတနှင့်အက - ဒေါ်စောမြဧကြည် (အလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့ရ) ...
... ဈေးများကို လျှောက်ကြည့်ခြင်း - မြသန်းတင့် ရန်ကုန်ဆူးလေဘုရားပြတိုက် ကြေးရုပ်ငယ် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း မန္တလေးရတနာပုံ နှင့် ရန်ကုန်ရတနာပုံ - ဇေယျ မြို့တော်ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေး - လင်းယုန်သစ်လွင် ...
... ဈေးများကို လျှောက်ကြည့်ခြင်း - မြသန်းတင့် ရန်ကုန်ဆူးလေဘုရားပြတိုက် ကြေးရုပ်ငယ် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း မန္တလေးရတနာပုံ နှင့် ရန်ကုန်ရတနာပုံ - ဇေယျ ...
7. ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသမိုငျး - မွငျ့ဆှေ
8. ဆေးဝါးပငျမြား အဘိဓာနျ (မွနျမာ၊ ရုက်ခဗဒေ၊ အင်ျဂလိပျ၊ ဟိန်ဒီ၊ ပါဠိ၊ တက်ကတ၊ ကခငျြ၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ မှနျနှငျ့သြှမျးအမညျမြား)
... တရုတ်-မြန်မာပြန် ဆေးကျမ်း - မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ) မြန်မာ့ဆေးပညာ အထင်မသေးရာ - သင်္ခါ ရှေးခေတ် အသံထွက် တိုင်းရင်းဆေး - မြသီတာဦးကံဆက် မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် - စိုင်းသီဟ ယုꨳယုတꨯး ꨟွင်ꨵဝုꨳ ယုꨲꨅွမ်ꨲꨀွမ်ꨲ - ...
9. မန္တလေး မြေမြို့ရိုးကြီး - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 186 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မေလ(၁)ရက်နေ့ထုတ် ဂေါဝိန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
10. ရှေးဟောင်း အဖိုးတန် ရှားပါးပိဋကတ်ကျမ်းစာအုပ်များ - ဇမ္ဗူထိန်လင်းကျောင်းတိုက် (မန္တလေး)
eBook file size: 217 KB ebook pages: 34 Publication: မိမိတို့ လိုအပ်သော ရှားပါး ကျမ်းစာအုပ်များကို ရနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သော စာအုပ်များကို ဤယခုစာအုပ်အညွှန်းထဲတွင် ရှာဖွေ၍ ထိုကျောင်းတိုက်တွင် သွားရောက်ကာ ကော်ပီပြုလုပ်အကူအညီတောင်းခံပြီး ...
11. မန္တလေးရတနာပုံ နှင့် ရန်ကုန်ရတနာပုံ - ဇေယျ
eBook file size: 106 KB ebook pages:5Publication: အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၁၂)၊ ၁၉၅၉-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဇေယျ၏စာပေဆောင်းပါးများ ...
12. ဘိန္နကရာဇာမင်း၏အနွယ်တော်များ - ဦးဝင်းမောင်(တမ္ပ၀တီ)
eBook file size: 1.18 MB ebook pages: 8 Publication: ၁၃၆၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း(၉)ရက်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၄) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ မဟာလောက မာရဇိန် ကုသိုလ်တော်ကြီးဘုရားအတွင်း၌ ကျင်းပသော ရှေးဟောင်းသမိုင်း ...
13. မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် - စိုင်းသီဟ
eBook file size: 200 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ်(၇၅)ထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download
14. မင်းကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားစီရင်တော်မူအပ်သော ၀ိပဿနာနယဒီပနီကျမ်း
eBook file size: 2.79 MB ebook pages: 73 Publication: ဤကျမ်းစာအုပ်ကို သီတဂူ ၀ါးချက် သံဃာ့ဆေးရုံ ကြာသပတေးနေ့ ဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့နှင့်မန္တလေးတိုင်း မြန်မာ့ရေနံ မိသားစုများမှ ၁၃၆၃-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ ...
15. ဗန်းမော်ခရိုင်သမိုင်း (၁၉၄၈-၆၂) - မခင်လေး
eBook file size: 1.56 MB ebook pages: 79 Publication: ၁၉၇၇-ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ၀ိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက် တင်သွင်းသော ကျမ်းစာဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းမှာ လက်နှိပ်စက်မူ ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ထားပါသည်။ ...
16. ဗိဿနိုးခေတ်နှင့်ယနေ့အမြင် - မောင်လွှမ်းမိုး
eBook file size: 222 KB ebook pages: 10 Publication: ၁၉၆၉-၇၀ ခုနှစ်ထုတ် မန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှစ်လယ်စာစောင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဗိဿနိုးနှင့်ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများ ...
17. မန္တလေးဖြစ်စဉ် - ဗိုလ်မှူးဘရှင်
eBook file size: 446 KB ebook pages:9Publication: ၁၉၅၆-ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဗိုလ်မှူးဘရှင်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Mandalay မန္တလေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ...
18. ရှေးခေတ်တက္ကသိုလ်နှင့်ပညာရပ်များ - မြကေတု
eBook file size: 195 KB ebook pages: 11 Publication: ၁၉၇၉/၈၀-ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကောလိပ်ထုတ် နှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- မြကေတု၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
19. မန္တလေးမြို့နှင့်ပုလိပ်ရောဂါ - လူထုဒေါ်အမာ
eBook file size: 80.9 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ်၊ စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- လူထုဒေါ်အမာ၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ
20. စစ်ကိုင်းတောင်သမိုင်း - ရွှေပြည်ဦးဘတင်
eBook file size: 12.5 MB ebook pages: 164 Publication: ကောဇာ ၁၂၉၇-ခုနှစ်၊ တန်ခူးလ၊ ပထမအကြိမ်၊ ၈၄-လမ်း၊ ကျောက်သွေးတန်း၊ မန္တလာဘုမ္မိစာပုံနှိပ်တိုက်၊ မန္တလေးမြို့။ download -Related Articles- စစ်ကိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ...